Sony Xperia mobile promotion with cashback
Duration 10 May 2017 - 17 May 2017
ရှယ်Promotionနော် ပုံမှန်လက်ဆောင် ၁၅မျိုးအပြင် Limited Days Promoအနေဖြင့် ထပ်မံပြီး Cashback 10,000Ksကိုလည်းရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
~~~1 Year Official Warranty~~~
Xperia XA Dual- 249,000Ks
[+လက်ဆောင်15မျိုး -> Xperia Orginal Cover + Xperia Screenguard + LED Stick + Earphone Case + SIM card + Any Topup Card + SIM Adapter + Waterproof bag + Power-bank + Car Charger + Travel Charging cable + Travel Charging Adapter + Auxiliary Cable + Phone Ring + OTG adapter] + Cashback 10,000 Ks
Xperia XA Ultra Dual- 389,000Ks
[+လက်ဆောင်15မျိုး -> Xperia Orginal Cover + Earphone case + LED Stick + HOCO Premium CUP [or] Bella Brand Lipstick + SIM card + Any Topup Card + SIM Adapter + Waterproof bag + Power-bank +Car Charger + Travel Charging cable + Travel Charging Adapter + Auxiliary Cable + Phone Ring + OTG adapter] + Cashback 10,000 Ks
XPERIA XZ Dual- 725,000Ks
[+လက်ဆောင်15မျိုး -> Cover + Screen-guard + Sony Umbrella + LED Stick + HOCO Premium CUP [or] Bella Brand Lipstick + SIM card + Any Topup Card + SIM Adapter + Power-bank + Car Charger + Travel Charging cable + Travel Charging Adapter + Car Audio Cable + Phone Ring + OTG adapter] + Cashback 10,000 Ks
Door to Door Delivery available now
လာရောက်ဝယ်ယူရန်ခက်ခဲသော customersများအတွက်လည်း အိမ်တိုင်ရာရောက် အရောက်ပို့စနစ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီနော်။
နယ်မှCustomersများအား ကားဂိတ်အရောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ။ အသေးစိတ်ကို Chatbox သုိ့မဟုတ် ဖုန်းဖြင့် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Software Service Available Now
- ဆိုနီဖုန်းများအား မြန်မာစာထည့်သွင်းပေးခြင်း (DRM Key OK/ Warranty OK/ Cameraမဝါးမပျက်)
- Fingerprint Hardware not available errorများရှင်းပေးခြင်း
- Version upgrade/ downgradeအစရှိသည်များပြုလုပ်ပေးခြင်း
အမှတ်၂၀၆၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမကြီး၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
(အိုးအိမ်ဦးစီးရုံးအနီး၊ သိမ်ဖြူမီးပွိုင့်မရောက်ခင်၊ စိန်ပေါလ်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအရှေ့)
Price List Updated on 10th April 2017
Promotion from MS Mobile Store
By MS Mobile Store
09 315 33444
No(206), Bogyoke Aung San street, Botataung, Yangon.
promotion ထညျ့သှငျးရနျ pricesmyanmar@gmail.com သို့ email ဖွငျ့ဆကျသှယျစုံစမျး မေးမွနျးနိုငျပါသညျ။
Prices Myanmar isaportal for showing lastest electronic price. All the
Copyright © Prices Myanmar 2014 - 2018